Dowladda oo dad u qabatay qaraxyadii xalay ee Muqdisho iyo Al-shabaab oo guul ka sheegtay – Radio Daljir
Dowladda oo dad u qabatay qaraxyadii xalay ee Muqdisho iyo Al-shabaab oo guul ka sheegtay
Seteembar 5, 2013 2:11 b 0
Muqdisho, September 5, 2013 – Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howgalo balaaran ka fuliyey Muqdisho, kadib dhowr qarax oo xalay fiidkii hore ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Wararka aan ka helayno Muqdisho waxay sheegayaan in howgalo balaaran oo dhinaca amaanka ah laga sameeyey caasimada xalayto, iyadoo la qaqabtay dhalinyaro fara badan oo ku sugnaa degmada Hodan, kuwaas oo laga shakiyey, baaritaana uu ku socdo.
Degmooyinka Xamarweyne, Wadajir iyo Hodan ayaa xalay waxaa ka dhacay dhowr qarax oo nooca gacanta laga tuuro ah, kuwaas oo qaarkood lala eegtay saldhigyo ay ciidamada booliska leeyihiin, balse lama sheegin khasaare rasmi ah oo ka dhashay.
Saraakiisha ciidanka booliska ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in weerarada ay xalay ahaayeen kuwo qorsheysan, waxay xuseen in uu jiray weerar kale oo isna xalay ka dhacay degmada Hodan, kaas oo uu ku dhintay qofkii is qarxiyey.
Kooxda Al-shabaab ayaa ka hadlay weerarada Muqdisho, qoraal ay soo dhigeen barta Twitter ayey ku sheegeen in weeraradii xalayto ahaayeen kuwo loogu talo-galay in lagu baabi?yo cadowga, isla markaasna waxay sheegeen in ay khasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda, ?in kastoo aysan shaacin tiro rasmi ah.
Soomaaliland dhalinyarada uga digtay in ay qeyb ka noqon rabshadaha gacan ka hadalka dhaliya
Baahin: Arbaca, 4- Sep 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso